Tilmaanta Live Blackjack Tilmaanta - Ciyaar Blackjack Live (2022)
Ugu Weyn Ee	/ Isbadalka	/ Ciyaar Live Blackjack
Ciyaarta Blackjack si dhakhso ah ayey u dhaqaaqday. Maanta, Blackjack Live Blackjack waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn ee khatarta qadka tooska ah ee khadka tooska ah, waana u mudan yahay mid ka mid ah cayaaraha ugu fiican ee loo yaqaan 'BlackJjack' oo lagu ciyaaro. In kasta oo ay ku nooshahay internetka Blackjack waxay isbedelaysaa qaar ka mid ah qawaaniinta, inbadan oo ciyaarta ayaa wali ah mid aan caadi ahayn. Aynu eegno.
U ciyaar lacag
Ma jiro wax badan oo ka duwan kuwa u dhexeeya ciyaarta ee Blackjack oo nool iyo noocyada kale ee laga yaabo inaad ku soo aragtay internetka. Farqiga ugu muhiimsan ee halkan ka jira ayaa ah inaad ka ciyaarto shirkadda ganacsade nool oo aad wali ku raaxeyso ciyaarta meel fog, halka nooca khadka tooska ah ee tooska ah lagu ciyaaro barnaamijyo kaliya. Waa kuwan waxyaabo la soo xuso:
Blackjack Live Blackjack waxaa lagu ciyaaraa ciyaaryahanka ka dhanka ah guriga
Ciyaar kasta waxay ka muuqan doontaa inta u dhexeysa laba iyo sideed meelood
Mar labaad, waa inaad noqotaa ilaa 21 dhibcood adigoon cabin
Dhammaan kaararka u dhexeeya laba iyo sagaal oo xajinaya wajigooda wajigooda
Kaararka oo dhan toban ilaa boqorka ayaa u qalma toban dhibcood midkiiba
ACE waxay noqon kartaa qiimahoodu 1 ama 11 dhibcood iyadoo kuxiran xaaladda
Waxaa jira kala duwanaansho kale oo yar yar oo halkan lagu qoro. Ciyaaraha tooska ah ee khadka tooska ah ee internetka ayaa badanaa yeelan doona labo qawaaniin, iyadoo kuxiran khamaarka, oo loogu talagalay kaararka ciyaaryahanka. Waxaa laga yaabaa in lagula dhaqmo wejiga ama wajiga.
Si kastaba ha noqotee, ganacsaduhu dhab ahaantii wuxuu helayaa hal kaar oo waji ah iyo hal kulan oo kaadh ah hoos. Kaarka labaad inta badan waxaa la ciyaaraa ka dib markii ciyaartoygu go'aansado waxa tallaabo ay qaadan doonaan.
Goobaha ugu fiican ee ugu fiican ee loo yaqaan 'Blackjack'
Sideed u ciyaartaa Live Blackjack?
Hadda oo aan ka nadiifinay qaar ka mid ah aasaaska khibradaha la-gashay ee ku nool, waxaa la joogaa waqtigii aan fiirin lahaa sida dhabta ah ee aad runtii u ciyaarto. Sababta oo ah waxaad ku ciyaari kartaa Blackjack Lilet Life Live, waxaa jira wax ka qabasho yar oo la xiriira qawaaniinta, laakiin guud ahaan, howshu waa tooseen. Aynu eegno.
Ciyaartoygu wuxuu si cad ugu guuleystaa haddii uu leeyahay Blackjack dabiici ah (10-dhibcood + Ace)
Haddii ciyaaryahan iyo ganacsade labadaba ay leeyihiin Blackjack, ciyaarta ayaa "riix"
Labada dhinac midkoodna waa lumin doonaa haddii ay dhaandoonayeen, taasi waa gacantooda ka badan 21 dhibcood
Si kastaba ha noqotee, haddii gacanta ugu horeysa ee ay ka hooseyso 21-dhibcood, waxay ku dabaqi karaan koorsooyin badan oo ficil ah oo halkan laga soo bilaabo. Muhiimad ahaan, ciyaartoydu waxaa la weydiiyaa inay rabaan inay garaacaan, istaagaan, labanlaab, kala qaybi, ama isa soo dhiibaan. Halkan waxaa ah sharaxaad kooban oo midkiiba:
Hit: Kaarka kale waxaa loola dhaqmaa ciyaaryahanka.
Istaag: Ciyaartoygu wuxuu ku faraxsan yahay gacantooda mana weydiisaneyso kaarar badan.
Labanlaab: Ciyaartoygu wuxuu kalsooni ku qabaa kaararkooda wuxuuna doonayaa inuu kordhiyo cabirka laba laab ee laba laab.
Kala go ' Ciyaartoygu wuxuu go'aansaday inuu u kala qaybiyo gacantooda laba gacmood oo kala duwan oo dib ugu celiya gacanta cusub isla lacagtaas.
Is dhiib: Ciyaartoygu ma arko hab uu ku guuleysto. Way isa soo dhiibaan oo ka soo ceshadeen nus ka mid kooxdooda.
Mar haddii ciyaaryahan go'aan ka gaaro, ciyaarta Blackjack Online Live Live ayaa sii socota iyadoo la raacayo ganacsadaha tooska ah ee helaya kaarkooda labaad. Waxaa jira qaar ka mid ah xeerar kale oo xiiso leh oo laga helo halkan halkan:
Mar haddii dhammaan guusha la ciyaaro, gacmaha waa la isbarbar dhigayaa
Hadday labada lafood isku qiimo leeyihiin, tani waxay ku dambayn doontaa riix, oo lacagtaada dib ayaad u soo celin doontaa
Ciyaartoygu wuxuu ku guuleysan doonaa xitaa lacag hadii ganacsaduhu kufsado
Xeerar badan oo Blackjack ah
Furaha lagu guuleysto ciyaarta ee Blackjack Live Blackjack waa in la ogaado oo dhan oo ku saabsan sharciyadooda. Waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay in halkan laga fiirsado, laakiin waxaan hubnay inaan liis gareyno waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato si dhakhso leh oo la heli karo. Ganacsadaha tooska ah ee internetka ee Blackjack waa inuusan ka duwanaanin ciyaaraha badankood, mana ahan. Waa kuwan waxa ku soo bandhigaya cayaaraha ciyaarta ganacsatada ee Blackjack.
Ciyaar ka mid ah ganacsadaha tooska ah ee loo yaqaan 'Blackjack' waxaa lagu ciyaaraa laba illaa sideed denks
Dheecaannada ayaa isku dhafan ka dib wareeg kasta si ay u yareeyaan xulashooyinka tirinta kaarka
Haddii labada ciyaaryahan ay leeyihiin gacmo isku mid ah, ciyaartu waxay ku dambayn doontaa riix
Ganacsaduhu had iyo jeer wuxuu ku dhufan doonaa gacanta 16 dhibcood
Ganacsaduhu wuxuu istaagayaa gacanta 17 jirka ah
Ciyaartoygu wuxuu awoodaa inuu hal mar kala baxo
Si kastaba ha noqotee, ciyaaryahanka ma awoodi doono inuu kala baxo 4s, 5s ama kaarar qiimahoodu yahay 10 dhibcood
Ciyaartoyda ma awoodi doonaan inay dib u rogaan
Ciyaartoyda ayaa kaliya labanlaabi kara 9, 10 iyo 11
Dhammaan kaararka kala goynta iyo gacmaha ayaa dhalisay inay u qalmaan laba jibbaar
Haddii ganacsaduhu uu leeyahay ciyaar wajiga ah, ciyaartoydu mar dambe ma dhiibi karaan
Ganacsadaha tooska ah ee khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee tooska ah ee tooska ah waa weligood dhagax lagu xardhay. Si kale haddii loo dhigo, waxaad filan kartaa qaar ka mid ah xeerarkan si aad waxyar uga duwan tahay. Nasiib wanaagse adiga, casinos khadka tooska ah ee internetka ayaa had iyo jeer kuu soo bandhigi doona liis aad u faahfaahsan oo ah waxa laga filan karo ciyaar kasta oo aad gasho.
Sidee ciyaar u tahay lacag-bixiyeyaasha nool ee Blackjack?
Lacag bixinta halkan waa runtii aad u fudud in la raaco. Xawaarahaaga xitaa lacag bixinta, saamiga waa 1: 1. Blackjack wuxuu bixin doonaa 3: 2, oo sharad caymis ayaa lagu bixin doonaa sicirka 2: 1.
Istaraatiijiyad Blackjack ah: Waxa la ogaado
Si la fahmi karo, waxaad rabtaa inaad ku fiicnaato ciyaarta BlackJjack Blackjack. Celcelis ahaan geeska guriga halkan waa 0.42%, oo si kastaba ha ahaatee qawaaniin yar yar, taasi waxay noqon doontaa celceliska faa'iidadaas oo faa'iido badan leh. Dhimashadan guriga ayaa quseeya cayaaraha muujinaya wax u dhexeeya 4 iyo 8 decks.
Waxaa jira dhowr waxyaabood oo maskaxda lagu hayo markii aad raadineyso inaad ciyaarto ganacsade nool. Bilowga, ma dooneysid inaad labanlaabto 11-aad ee ka soo horjeedda ganacsadaha 10. Waxaad wali labanlaabi kartaa 9, 10, ama 11, si kastaba ha noqotee.
Maskaxda ku hay in wax labanlaabanaya ama kala-goynta ay wali noqon karto mid khatar ah, gaar ahaan haddii aad ka ciyaarto ciyaaryahan ganacsade ah.
Ciyaar bilaash ah
Isku day ciyaaro blackjack at casinos talinayaa!